Kedu ihe egwu dị na Towerlọ Elu nke Tek? | Martech Zone
Kedu ihe ọ ga-abụ ma ọ bụrụ na ụlọ elu gị nke igwe na-adaru ala? Ọ bụ echiche dakwasịrị m na Satọde ole na ole gara aga ka ụmụ m na-egwu Jenga mgbe m na-arụ ọrụ na ngosi ọhụụ banyere ihe kpatara ndị ahịa ga-eji chegharịa na teknụzụ ha. Ọ kụrụ m na teknụzụ ngwongwo na ụlọ elu Jenga nwere ọtụtụ ihe. N'ezie, a na-akpọ Jenga site na ịkọba osisi osisi ruo mgbe ihe niile gbadara. Agbakwunyere oyi akwa ọhụrụ ọ bụla, ntọala ya na-esighi ike… n'ikpeazụ ụlọ elu ahụ na-ada. O di nwute, ihe ntanetị di iche iche di otu uzo. Ka agbakwunyere oyi akwa, ụlọ elu ahụ na-esighi ike ma na-ewebatawanye ihe egwu.
Kedu ihe kpatara ọ ga-eji nwee mmasị na teknụzụ ndị ọzọ?
Ọfọn, na okwu m kwuru n'elu na m na-arụ ọrụ na - m na-adịbeghị anya nwere obi ụtọ nke na-eweta ya na Lọ ahịa ogbako na Las Vegas. Ọ dabara na ndị bịara ya, ekwenyere m, n'ihi na ọ dị ezigbo iche na ihe ọtụtụ ndị ahịa na ndị na-ere ahịa na-ekwusa taa. E kwuwerị, ụwa jupụtara na ozi gbasara otu esi eme ya na ihe kpatara anyị ji achọ ỌZỌ teknụzụ. N'ezie ọ bụghị obere. Ma olee otu teknụzụ, ọ bụghị anyị dị ka ndị na-ere ahịa na ndị na-ere ahịa, bụ ihe ngwọta maka ịrị elu na-eto eto site na azụmaahịa anyị na ịbawanye atụmanya site n'aka ndị ahịa.
Dị ka anyị niile na-nọgidere bombarded na uka ichekwa nke ozi na-eti mkpu na marketers na-eto eto anyị tech stacks, M na-arịọ gị ka ị wepụta oge ma chee echiche banyere ya ma maa ya aka. Echiche a bụ na ọ bụrụ na anyị agbakwunye teknụzụ anyị, ọ ga - aka mma ka anyị nwee nsogbu. N'ezie, eziokwu bụ n'ezie dị iche. Dika ihe di iche iche nke ihe eji eme ihe, ngwanrọ, ngwa, na sistem di iche iche, ihe kariri, ego, na ihe ize ndụ ị na-ewebata na nzukọ gi.
Fọdụ ndị na-ere ahịa na-eleba anya na mbara ala Martech ma chọọ iji ọtụtụ ngwaọrụ ndị a dịka ha chere na ha nwere ike ma ọ bụ kwesiri. (Isi mmalite: Martech Taa)
You maara na imirikiti ndị na-ere ahịa na-eji ihe karịrị ọkara ọkara teknụzụ? N'ezie, 63% nke ndị isi ahịa na-ekwu na ndị otu ha na-eji ebe dị n'etiti isii na 20 dị iche iche teknụzụ, dị ka Onye ndu
Isi Iyi: Ndị na-ere ahịa 500 na-ekpughe atụmatụ 2018 ha, onye nduzi
E nwere ọrịa zuru ebe niile na-abanye ahịa dị ka ọrịa. "Onyinyo IT" na ya metụtara ihe ize ndụ nanị ike-eleghara anya ọ bụla aba.
Onyunyo IT na ihe ize ndụ ọ na-ebu
Issuesfọdụ okwu na-apụta na ndò mgbe ngwa ma ọ bụ ngwaọrụ ọhụụ pụtara na akụrụngwa ụlọ ọrụ na-enweghị itinye aka na nduzi site na IT. Nke a bụ Onyunyo IT. Know maara okwu ahụ? Naanị ya na-ezo aka na teknụzụ akpọbatara na nzukọ na-enweghị itinye aka na IT.
Onyinye IT nwere ike iwebata ihe egwu nchekwa na nhazi, esemokwu nnabata, nhazi na mwepu na nsogbu, na ndị ọzọ. Ma, n’ezie, sọftụwia ọ bụla nwere ike ịbụ Onyunyo IT… ọbụlagodi nchekwa kachasị adị, akacha eji ngwa yana ngwa ahịa. N'ihi na ọ bụghị banyere tech, ya onwe ya. Ọ bụ maka eziokwu ahụ na IT amaghị na e webatala ya na nzukọ ahụ. Ma, ya mere, Ọ gaghị adị ka ihe mmegharị ma ọ bụ ngwa ngwa ịzaghachi mgbe teknụzụ ahụ metụtara mmebi, mbanye anataghị ikike, ma ọ bụ okwu ndị ọzọ - naanị n'ihi na ha amaghị na ọ dị na mgbidi ụlọ ọrụ ahụ. Ha enweghị ike nyochaa ihe ha na-amaghị bụ ebe ahụ.
Fọdụ n'ime ngwa ndị a na-ahụkarị arụnyere na-enweghị nnabata IT gụnyere ihe na-adịghị njọ na arụpụta ọrụ yana usoro ngwa.
Ndụmọdụ Ndụmọdụ: Ndị a abụghị ngwaọrụ “ọjọọ”. N'ezie, ha na-adịkarị nchebe na nchekwa. Cheta na sọftụwia na nyiwe a nabatara ebe niile nwere ike ịbụ Onyunyo IT. Nsogbu a adighi na teknuzu, ya onwe ya, kama karia na enweghi ntinye aka site na IT. Ọ bụrụ na ha amaghị na ndị a ma ọ bụ ọ bụla ọzọ tech na-ada n'ime nzukọ, ha enweghị ike ijikwa ma ọ bụ nyochaa ya maka ihe ize ndụ. Nkà na ụzụ ọhụụ ọ bụla, agbanyeghị obere, kwesịrị ịdị na igwe nyocha IT.
Ma ka anyị lelee atọ n'ime isi ihe kpatara Shadow IT na nnukwu teknụzụ teknụzụ na-etinye gị na ndị otu gị n'ọtụtụ nsogbu na ihe egwu.
Arụghị ọrụ na redundancies - More iberibe tech - ọbụna arụpụtaghị ngwa ọdịnala, esịtidem chat usoro, na otu-apụ "ebe" ngwọta - pụtara ihe oge a chọrọ iji jikwaa ha niile. Otutu teknụzụ na ngwaọrụ mepụtara ndị na-ere ahịa ka ha bụrụ ndị njikwa njikọta teknụzụ, ndị na-eme data, ma ọ bụ ndị njikwa faịlụ CSV. Nke a na - ewepụ oge enwere ike iji ya rụọ ọrụ kama ọ bụ ihe okike, atụmatụ mmadụ nke ahịa. Chee echiche banyere ya… ole nyiwe ị na-eji kwa ụbọchị iji rụọ ọrụ gị? Olee oge ị na-eji arụ ọrụ ndị a arụ ọrụ na-abụghị usoro ịkwọ ụgbọala, na -emepụta ọdịnaya dị egwu, ma ọ bụ na-emekọ ọrụ na ndị ọrụ ibe gị? 82% nke ndị ahịa na ndị ọre ahịa na-efufu ihe dị ka elekere elekere kwa ụbọchị na-agbanwe n'etiti ngwa ọrụ azụmaahịa Kedu ụdị egwu na-atụ egwu nke a bụ mgbe ị tụlere na nke a ruru elekere 5 kwa izu. 20 awa kwa ọnwa. Oge 260 kwa afọ. Niile ejiri njikwa teknụzụ.
Gwọ a na-atụghị anya ya - Onu ahia onu ahia na-eji ihe kariri ihe eji aru oru isii iji rụọ oru ha. Ndị isi ha na-ejikwa dashboard abụọ na ise ọzọ na akụrụngwa na-akọ akụkọ iji ghọta etu ndị otu ha si akọ akụkọ. Tụlee otu ọnụahịa nke ngwaọrụ ndị a nwere ike isi tinye (ma ọ karịrị naanị obere olu):
Ịgba ụgwọ: Ọtụtụ n'ime ngwaọrụ ndị a bụ ihe ejighi oru, nke pụtara na anyị na-akwụ ụgwọ maka ọtụtụ ngwaọrụ na-eme otu ihe ahụ.
Ịhapụ ya: Mgbe ụfọdụ, anyị na-eweta na teknụzụ maka otu ebumnuche na, ka oge na-aga, anyị na-esi na mkpa a pụọ… mana anyị na-ejigide teknụzụ ahụ, agbanyeghị, ma na-aga n'ihu na-eweta ụgwọ ya.
Nkuchi Gap: Ihe ndị ọzọ eji arụ ọrụ ma ọ bụ teknụzụ teknụzụ na-enye, O yikarịrị ka ị ga-anabata ha niile. Enwere ọtụtụ atụmatụ na ọrụ karịa otu ndị otu egwuregwu nwere ike ịmụ, ịnakwere, na itinye n'ọrụ n'ime usoro ha. Yabụ, mgbe anyị na-azụ mgbịrịgba na mkpịsị niile, anyị na-ejedebe site na iji obere pasent nke atụmatụ ndị dị mkpa… mana anyị ka na-akwụ ụgwọ maka ngwungwu niile.
Nzuzo data / nchebe na ihe ize ndụ nhazi - Inwekwu teknụzụ nke akpọbatara n'ime nzukọ - nke bụ Shadow IT - a na-ebutekwu ihe egwu yana ya:
Mwakpo cyber. Dabere na Gartner, site na 2020, a ga-enweta otu ụzọ n'ụzọ atọ nke cyberattacks na-aga nke ọma megide ụlọ ọrụ site na ngwa Shadow IT.
Ihe data mebiri. Ihe data mebiri na-efu ihe dị ka $ 3.8 nde.
Ndị otu IT gị nwere usoro, usoro iwu, usoro, yana usoro nchekwa iji belata nsogbu ndị a. Mana ha enweghị ike ịza arụ ma ọ bụ mee ngwa ngwa mgbe ihe egwu dị na teknụzụ ha na-amaghị na ọ dị n'ime nzukọ ahụ.
Anyị chọrọ mkpokọta mindshift, onye na-agbanwe otú anyị si ele tech mmejuputa na-ewe anyị site na "mgbasa" mindset ka otu nke "nkwado." Oge erugo ịlaghachi n’ihe ndị bụ isi.
Kedu otu anyị ga-esi ebipụ, olee ebe anyị nwere ike ịmekọrịta redundan, yana kedu ka anyị ga-esi wepu ngwaọrụ ndị na-adịghị mkpa?
Enwere usoro ole na ole ị ga - eme iji bido.
Malite na ihe mgbaru ọsọ gị - Laghachi isi nke Marketing 101. Push na teknụzụ gị n'akụkụ ma chee naanị ihe ndị otu gị chọrọ iji mezuo iji nyere azụmahịa ahụ aka imezu ebumnuche ya. Kedu ihe mgbaru ọsọ ahịa gị? Ya mere, mgbe mgbe, anyị na-amalite na teknụzụ wee kwado onwe anyị si ebe ahụ gaa usoro azụmaahịa na-egosipụta ozugbo na teknụzụ anyị. Echiche a na-ala azụ. Buru ụzọ chee ihe mgbaru ọsọ gị. Teknụzụ ga-abịa mgbe e mesịrị iji kwado atụmatụ gị.
Nyochaa teknụzụ gị - Jụọ onwe gị ajụjụ ndị a gbasara nchịkọta teknụzụ gị na otu ndị otu gị si emekọrịta ya:
Na-emezigharị usoro ịre ahịa azụmaahịa niile? Ego ole ka o were?
Oge ole ka ị na-eji ijikwa teknụzụ gị eme ihe?
Ego ole ka ị na-emefu na teknụzụ gị niile?
Ndi ndi otu gi na etinye oge ha ijikwa teknụzụ? Ka ha na - enyefe ngwa ọrụ iji bụrụ ndị ahịa, ndị ahịa okike?
Ndi oru ntanetị gị na-arụ ọrụ maka gị ka ị na-arụ ọrụ maka teknụzụ gị?
Chọọ Tech Dị Mma Maka Atụmatụ Gị - Naanị mgbe ị kwadoro ebumnuche gị, nyochaa nchịkọta teknụzụ gị, yana otu ndị otu gị si eso ya akpakọrịta, ibido ịtụle ụdị teknụzụ ịchọrọ iji weta usoro gị. Cheta, teknụzụ gị kwesịrị ịbawanye mbọ nke gị na ndị otu gị. Ọ bụghị ụzọ ọzọ gburugburu. N'ezie, anyị nwere ụfọdụ ndụmọdụ maka otu ị ga - esi họpụta teknụzụ dị mma maka gị, mana agaghị m atụgharị isiokwu a ka ọ bụrụ ahịa ahịa. Ndụmọdụ kachasị mma m ga-enye bụ:
Tụlee ichikota nchịkọta gị n'ime ụzọ ole na ole o kwere mee.
Ghọta otu teknụzụ gị ga - esi enyere gị aka imezu ihe ọ bụla.
Jụọ otu teknụzụ gị ga-esi mee ka data gị jikọọ ọnụ ka ị nwee ike nweta echiche zuru oke, nke jikọtara ọnụ nke ndị ahịa ọ bụla yana itinye ihe ndị dị ka AI na igwe mmụta nke ọma.
Onye mmekorita ya na IT - Ozugbo inwee atụmatụ gị ma chọpụtakwa teknụzụ ị chere ga-enyere gị aka ime ya nke ọma, rụọ ọrụ na IT iji hụ ya ma tinye ya n'ọrụ. Nwee mmekọrịta siri ike na IT iji guzobe usoro akọwapụtara nke baara gị abụọ uru. Mgbe ị na-arụkọ ọrụ ọnụ dịka otu, ị ga-enweta teknụzụ kachasị dị nchebe, nke kachasị arụ ọrụ na-echebekwa ụlọ ọrụ gị na data ndị ahịa gị.
Ngwaọrụ ọgbara ọhụrụ na azịza abụghị nsogbu ahụ. Ọ bụ eziokwu na anyị ekpokọtara ha ọnụ na ntanetị nke Frankensteined. Teknụzụ aghọwo nzube, ọ bụghị ihe. Nke ahụ bụ nsogbu.
N'ezie, mmemme anyị na mụ onwe anyị na-eji kwa ụbọchị na-adịkarị mma ma na-adịghị emerụ ahụ. Okwu a na - ebilite mgbe ejiri ha ma IT amaghị, mgbe igwe bidoro jikwaa gị karịa nke ọzọ, yana n'oge ndị ahụ mgbe ha nwere nsogbu ịntanetị.
N'ikpeazụ, nhọrọ kachasị mma bụ nke na-eme ka ihe niile anyị chọrọ dị mkpa - otu, ịdị n'otu ahịa n'elu ikpo okwu.
Dị ka ihe a na-apụghị imebi emebi, nke na-akwụsi ike na mbara igwe (nke na-abụghị ụlọ elu Jenga nke mpempe akwụkwọ a na-atụghị anya ya), ịma mma nke usoro mgbasa ozi dị n'otu, nke jikọrọ ọnụ karịa ụyọkọ nke ngwaọrụ ndị a na-ejikọta ọnụ. Oge erugo icheghachi echiche na teknụzụ ahụ.
Jide ihe nkwado PDF anyị na-akọwapụta nke ọma na Onyunyo IT, ma nye gị ihe omume iji wepụ nsogbu ndị a! Jikọọ na ka m mara mbipụta ị hụrụ ma ọ bụ nwee ọtụtụ teknụzụ, ma ọ bụ maka ozi ndị ọzọ gbasara otu esi eme ka mbọ ahịa ahịa dijitalụ gị sie ike site na iji usoro niile emere maka ndị ahịa.
Download Kedu Ihe Ize Ndụ Na-ezo Gị na Tech Tech Stack?
Tags: eduziEmarsysitahịa teknụzụ ahịankatamartech tojupụtaran'ihe ize ndụsecuritykpuchie yaụlọ elu nke teknụzụnhọrọ ndị na-ere ahịa